Ny Fanahy Masina - PuSiTuo tsaina Teknolojia
Izahay nanolo-tena ho fanatsarana ny kalitaon'ny fiainana sy ny fahasalamana ny olona manerana izao tontolo izao avy amin'ny zava-baovao eritreritra, ny asa nanirahana antsika, ny fanahy sy ny orinasa miara-miasa mba manorina ny fototry ny finoana ny asa sambatra sy hankafy ny fiainana.
Izahay mitondra ny R & D ekipa ho ny fiainan'ny olona, ​​asa, fianarana, ary tsy tapaka hahatakatra ny zavatra ilain'ny mpanjifa samihafa, mihaino ny fitakiany, ary tsy tapaka mampiditra zava-baovao eo amin'ny fampandrosoana sy ny dingana.
Ny tanjony dia ny hanana vokatra handamina mpanjifa 'zavatra ilaina eo amin'ny asa, fianarana sy ny fahasalamana. Amporisihana R & D mpiasa mba mandrakariva hahalala ny zavatra ilain'ny olona manerana izao tontolo izao, miasa akaiky amin'ny mpanjifa mba hanompo azy miaraka amin'ny teknolojia vokatra manan-tsaina indrindra.
Fanavaozana mitohy lavitra afaka manova ny fiainan'ny olona. Pusituo manenjika ny olona rehetra handray anjara amin'ny zava-baovao sy mampiroborobo feno famoronana. Nandritra izany fotoana izany, isika dia mandoa ny saina ho bebe kokoa ny mahasoa sy ny fomba fiasany ny vokatra sy ny fanaovana ezaka mba hamboly Nifanesy koa ny R & D ekipa ny mieritreritra mamorona.
Job fahafaham-po sy ny fiaraha-mientana ifampizarana ny fototry ny firaisan-kina no hanatontosana izany dia amin'ny famoronana soatoavina tsara ny toe-piainana ho an'ny mpiasa amin'ny fahasalamana sy ny asa fiarovana.
Code ny Fampiharana
Isika tsy mivadika amin 'ny soatoavina sy ny mpanjifa. Mifampiresaka miharihary izahay sy manao ny marina miaraka amin'ny mpiasa, mpiara-miasa, ary ny mpanjifa. Ao amin'ny asa isan 'andro, misokatra foana isika adihevitra momba ny olana sy mitady vahaolana tsara kokoa.
Izahay dia nanao hanao bebe kokoa ny fiainan'ny olona, ​​ny asa, ary mianatra mora kokoa sy salama kokoa.
Ny vokatra manampy olona an-tapitrisany manerana izao tontolo izao hanatsara ny fiainany sy ny asa andavanandro tontolo iainana sy ho salama kokoa ny fiainana izay ao akaiky nahavita fiaraha-miasa amin'ny mpanjifa. Isika dia hanohy hampiasa ny nandroso ny teknolojia eo amin'ny ergonomic manan-tsaina noho ny R & D tafika mba hanatsarana ny kalitaon'ny fiainana ho an'ny olona maro kokoa.
Tianay Energy fahavaratra
Mifantoka amin'ny angovo izahay tahiry sy hampihenana ny fanerena eo amin'ny tontolo iainana eo amin'ny famokarana sy ny orinasa mpamokatra entana tsipika vahaolana.
Ny olona mirona, mitohy fanoloran-tenany ho fiaraha-monina dia ny fikatsahana antsika mandrakizay. Isika dia mirehareha ny amin'izay ny fandraisana anjara mavitrika sy ny mpitarika eo amin'ny fiaraha-monina eo an-toerana. Ary ny mpiasa rehetra mahatsiaro mirehareha ny fanompoana ny fiaraha-monina.